एउटा सानो गल्तीले ७ वर्षीया अदीति ओझाले संसारबाट सदाको लागि बिदा भइन् ! – नेपाली सूर्य
एउटा सानो गल्तीले ७ वर्षीया अदीति ओझाले संसारबाट सदाको लागि बिदा भइन् !
January 12, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on एउटा सानो गल्तीले ७ वर्षीया अदीति ओझाले संसारबाट सदाको लागि बिदा भइन् !
मोरङको उर्लाबारीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक बालिकाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परेर उर्लाबारी नगरपालिका ८ खाईवा चोककी ७ वर्षीया अदीति ओझाको मृत्यु भएको हो।
अदीतिलाई को २० प ९७२७ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक उद्धब पोखरेलले जानकारी दिए। अटोबाट ओर्लने क्रममा मोटरसाइकलले अदीतिलाई ठक्कर दिएको थियो। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
उनका आमा बीपीसाका अनुसार दिउसो २ः ३० बजेतिर उत्तरतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा बालिका गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उनको उपचारका क्रममा साँझ ७ः३० बजेतिर विराटनगरको विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक पोखरेलको भनाइ छ।
दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकल चालक उर्लाबारी ५ का ५० वर्षीय विनोद अग्रवाल पनि सामान्य घाइते भएका छन्। उनको प्रहरी निगरानीमा गोदावरी अस्पताल उर्लाबारीमा उपचार सम्भव नभएपछि धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोपा लगिएको छ।
घटनाको अनुसन्धान थालेको प्रहरीले मोटरसाइकल भने नियन्त्रणमा लिएको छ। ओझाको मृत्युको घटनाले गाउँ शोकमा डुबेको छ। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
सडक दु’र्घ’ट’नामा परि मलेसियाबाट स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका एक जना नेपाली कामदारको मृ’त्यु
‘नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्रै बोक्ने हो भने कर बढ्छ’
May 2, 2020 May 2, 2020 Nepali Surya
February 27, 2021 Nepali Surya
नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीमा कोरोना संक्रमण
October 6, 2020 Nepali Surya